Tantaran'i Jeremy, izao tontolo izao eran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana nanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary avy eo dia nalefan'izy ireo tany amin'ny sekoly tsy miankina.
Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nitsangitsangana teo amin'ny seziny izy, ary nitabataba be. Indraindray dia niteny mazava izy indray, toy ny hoe nisy tara-pahazavana namirapiratra teo amin'ny haizin'ny ati-dohany. Ny ankamaroan'ny fotoana anefa dia nahatezitra ny mpampianatra azy i Jeremy. Indray andro, niantso ny ray aman-dreniny izy ary nangataka azy ireo ho any an-tsekoly hanao fotoam-pitsarana.
Tsotra ny vaovao tsara - nitsangana i Jesosy! Enga anie ho feno fifaliana anao ny fitiavan'ity fetin'ny fankalazana ara-panahy ity.